Banyere Anyị - Ningbo J & S Botanics Inc.
Welcome to Ningbo J & S Botanics Inc., dị ka ike na 1996, anyị anọwo na a na-eduga soplaya nke Herb Extracts, Bee Ngwaahịa na Food Mmeju na China, na ngwaahịa na-ukwuu n'ime mma site kọsha na ECOCERT organic akwụkwọ. J & S Botanics e gosiri dị ka Ningbo Agricultural eduga Enterprise kemgbe 2009.
J & S Botanics emi odude ke Beilun district, Ningbo obodo, ọ bụ nnọọ adaba n'ihi na ma na oké osimiri na ala njem. Anyị ụlọ ọrụ ma na R & D Center ekpuchi 2,400 acres na a ulo oru mbo nke $ 4.5 million.The echichi nke ụlọ ọrụ na usoro aga na-nditịm na-achịkwa dị ka GMP ọkọlọtọ. Anyị kwa afọ mmepụta nke ogwu wepụ bụ ruo 1000MT, nēkpuchi 100 ngwaahịa, anyị ike na ọhụrụ ngwaahịa nnyocha.
Iji hụ na ihe njikarịcha maka n'ichepụta usoro na ịnọgide na-eke ọrụ nke anyị na ngwaahịa, J & S Botanics n'ọrụ Doctor PARIDE si Italy, onye na-edu a otu na-eme nnyocha na-ekere òkè-emelite usoro oge niile. Ugbu a J & S Botanics ka ekesịpde karịa 7 nchọpụta Kemịkalụ na ọtụtụ pụrụ iche teknụzụ na ụwa na-eduga larịị. Ndị a elu usoro-enyere anyị aka ịnọgide na-enwe mmepụta kwụsie ike, melite arụ ọrụ arụmọrụ na-eme ka ndị na-eri, mmọdo maximized uru ahịa anyị.
Fọrọ nke nta niile anyị na ngwaahịa ndị n'ihi na mbupụ. Anyị isi ahịa na-agụnye Southeast Asian mba, Middle-East, Spain, Germany, France, Switzerland, Japan, na USA, Australia, South Africa na Taiwan ebe. Olileanya ka a ogologo Tern imekọ ihe ọnụ na ị, ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla ase, biko chere free ka anyị mara.